Isitudiyo kwigumbi likaElena eRiotorto - I-Airbnb
Isitudiyo kwigumbi likaElena eRiotorto
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElena
Istudiyo esilungisiweyo nenefenitshala ekwindawo enembali ethe cwaka eRiotorto ekwikhilomitha eziyi-3 ukusuka kumalwandle amahle, iikhilomitha eziyi-10 ukusuka eFollonica, 12 ukusuka ePiombino.Double bed enomatrasi omfumamfuma + nesitulo esinamavili. Izinto zebhedi,iitawuli kunye neetawuli ziqukiwe.Kitchen zixhotyiswe ngokutya kwesidlo sakusasa. Igumbi lokuhlambela elineesepha nezinto zokuhlamba. Indawo yangaphandle yabucala eneendawo zokutyela zeal fresco kunye neendawo zokutyela.
Indawo yokuhlala ethe cwaka,embindini welali, kwisitrato esidala esikhokelela ngqo kwisikwere secawa. Indawo efumanekayo yokutya phandle eneyadi encinci enetafile. Indawo yokupaka esimahla phambi kwendlu
4.80 · Izimvo eziyi-111
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi111
I-Riotorto lilizwe elizolileyo kwaye lilungele ixesha lokuzola nokuzola. Ngelo xesha,ngenxa yendlela efanelekileyo, unokufikelela kwiindawo ezibalulekileyo zabakhenkethi kunye neempawu zembali.
Embindini weRiotorto kukho iindawo zokugcina iimpahla zeCoop ezinento yokwenza nokuthengisa,i-pizzeria, ibhari kunye nexesha lemibhiyozo emininzi yasehlotyeni apho unokungcamla iimveliso eziqhelekileyo zase-Tuscan
isiWir sprechen de Deutsch Kwi-parle francais Isoloko ifumaneka ukuze ufumane inkcazelo kunye nezinto ozidingayo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Riotorto